नवीन व्यवसाय विचार: विचारहरूले तपाईंलाई धनी बनाउन सक्छ अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | | negocios
मानव संसारको सबैभन्दा उत्तेजित दिमाग मध्ये एक छ। हामी आफूले सपना देखेको कुरा आविष्कार गर्न सक्षम छौं, र यसलाई प्राप्त गर्न हामीलाई वर्षौं लाग्छ भने पनि हामी यसलाई सत्य बनाउँछौं। तर तपाईं नवीन व्यापार विचारहरू सिर्जना गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ। तिनीहरू सामान्य व्यक्ति हुनु आवश्यक छैन, केवल त्यो "थोरै ज्ञान" को लागी सम्भावित देख्नको लागि हो जुन अरुले अहिलेसम्म महसुस गरेका छैनन्।
तर, अभिनव व्यापार विचारहरू कसरी सिर्जना गर्ने? तिनीहरू के हुन सक्छन्? आज हामी ती साना चीजहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन तपाईंलाई एकदम ठूलो बनाउँदछ (र संयोगवश तपाईंले सामना गरिरहनु भएको आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन)।
1 अभिनव व्यापार विचारहरू
1.1 स्मार्ट गद्दा
1.2 ट्याक्सीमा मनोवैज्ञानिक उपचार
1.3 एयरपोर्टहरूमा होटल केबिनहरू
1.4 अभिनव व्यवसाय विचार: गृह चिकित्सकहरू
1.5 बार्टर वेबसाइट
1.6 अभिनव व्यवसाय विचार: एक दिनको लागि प्रसिद्ध हुनुहोस्
अभिनव व्यापार विचारहरू
केहि नवीन व्यापारिक विचारहरूले घण्टी बजाउन निश्चित छन् किनभने ती सुरू गरिएको छ। र हामीले भनेजस्तै कसैलाई यो विचारमा विश्वास गर्न पर्याप्त छ कि यसलाई सत्य बनाउँदछ। र यदि यो पनि एक परियोजना हो जुन करोडौं व्यक्तिको जीवनलाई सुल्झाउन वा अझ राम्रो गर्न सक्दछ, सफलता निश्चय छ।
एक अभिनव विचार यो त्यस्तो चीजको रूपमा देख्नुपर्दैन जुन आविष्कार भएको छैन। कहिलेकाँही उत्पादनहरूका बारे मात्र सोच्न आवश्यक हुन्छ जसले हाम्रो जीवनलाई शान्त, रमाईलो वा आरामदायी बनाउँदछ; वा प्रविधिमा जुन हामीलाई सोच्दछ कि "भविष्य" जुन हामीले विज्ञान कथा फिल्महरूमा देख्यौं पहिले नै यहाँ छ। अन्य विचारहरू यति आधारभूत हुनसक्दछन् कि तपाईं किन उनीहरूले पहिले कहिल्यै आविष्कार गरेनन् भनेर सोच्नुहोस्।
के तपाइँ तपाइँ तपाइँलाई केहि विचारहरु छोड्न चाहानुहुन्छ? यहाँ तिनीहरू जान्छन्:
तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो निद्रा दिनहुँ आवश्यक छ। यदि तपाइँ राम्ररी सुत्नुहुन्न भने, तपाइँ प्रदर्शन गर्नुहुने छैन, र तपाइँसँग "कुकुर मुड" पनि हुन सक्छ। यसैले विश्राम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। समस्या यो हो कि कहिलेकाँही हामी राम्रो गद्दा भए पनि यो गर्न सक्दैनौं, हामी चाँडै सुत्न जान्छौं र हामी दिमागबाट समस्याहरू निम्त्याउँछौं।
यसमा हामीले त्यसलाई थप्न आवश्यक छ, यदि तपाइँ कसैसँग सुत्नुभयो भने, तपाइँसँग जहिले पनि कम्बलको समस्या हुन्छ, चाहे यो तातो होस् वा उनीहरूसँग चिसो आदि। एक नवीन व्यवसाय विचार? स्मार्ट गद्दा बनाउनुहोस् जुन तपाईंलाई दिन्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो ठाउँ। अर्को व्यक्ति चल्दा तिनीहरू बस्दैनन् कि, उनीहरू गद्दाको तापक्रम बढी वा कम तातो राख्नको लागि चलाउँछन्।
ट्याक्सीमा मनोवैज्ञानिक उपचार
हो, हामीलाई थाहा छ स्पेनमा ट्याक्सी लिनु एकदम साधारण कुरा होइन तर यो अहिले पनि भइसक्यो (यदि छैन भने त्यहाँ धेरै ट्याक्सी चालकहरू हुँदैनन्)। तथ्य यो हो कि धेरै पटक, हुन सक्छ यो तथ्य यो हो कि यो हामी बाहिरको व्यक्ति हो, हामी उनीहरूसँग इमानदार छौं, र तिनीहरू एक प्रकारका मनोवैज्ञानिक बन्छन् किनकि उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दछन् र हामीलाई विचित्र वाक्यांश दिन्छन् जसले हामीलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछ।
तिनीहरूले के सोचेका छन्? खैर सिर्जना गर्नुहोस् मनोविज्ञ विशेषज्ञहरु द्वारा संचालित ट्याक्सीको फ्लीट ताकि ग्राहकहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छन तर थप रूपमा, मद्दत सेवा प्रस्ताव गर्न सक्छ, यात्रा को अवधि को लागी एक मनोवैज्ञानिक को रूप मा। र सावधान रहनुहोस्, यो अर्को संसारको कुनै चीज होइन, वास्तवमा स्टकहोममा, उनीहरूले यसलाई सुरू गरिसकेका छन् र सत्य यो हो कि यसले धेरै सफलता पाइरहेको छ। किन हामी स्पेन मा स्पेन मा काम गर्दैनन्?
एयरपोर्टहरूमा होटल केबिनहरू
अभिनव व्यवसाय विचारहरु मध्ये हामीसंग यी छन। यी साना केबिनहरू हुन् जुन होटेल कोठाको रूपमा डबल छन्। यसको उद्देश्य? कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं उडान पकड गर्न लाग्नु भएको छ र यो रद्द भयो कि ढिला भयो ... र तपाईंलाई थाहा छैन जब तपाईं उडानमा जाँदै हुनुहुन्छ। राम्रो रूपमा एयरपोर्टमा पर्खनुको सट्टा, त्यहाँ धेरै असुविधाजनक सीटहरूमा हुन्छन्, जुन राम्रोसँग सुत्न वा आराम गर्न पनि सक्दैन, तपाईं सक्नुहुन्छ आराम गर्न र थोरै गोपनीयता राख्न यी होटल क्याबिनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
सरल, सही? निश्चित रूपमा विमानस्थलहरूमा ठाउँ सेट गर्न सम्भव हुनेछ धेरै केबिनहरू व्यवस्था गर्न, यस्तो प्रकारले कि एयरपोर्टमा अनिवार्य रूपमा उनीहरूलाई सहज बनाइनेछ।
अभिनव व्यवसाय विचार: गृह चिकित्सकहरू
निश्चय पनि एक पटक तपाईले डाक्टरसँग भेट गर्नु भयो र जब दिन आयो, तपाई घर छाड्न चाहानु भएन किनभने तपाई आरामदायक हुनुहुन्थ्यो, किनभने वर्षा भइरहेको थियो वा केवल तपाईले अरु कतै जानु पर्ने महसुस गर्नुहुन्न। घरमा हुँदा।
त्यसकारण, किन डाक्टर तपाईंलाई भेट्न आएनन्? चिकित्सकको घर भ्रमणले बिरामीहरूलाई बढी आराम र शान्त हुन मद्दत गर्दछ। यो सत्य हो कि उनीहरूसँग आवश्यक सबै उपकरणहरू छैन ... वा तिनीहरू? आजकल डाक्टरहरूले तपाईलाई मात्र सुन्दछन्, तिनीहरूले प्रायः अरू बढी गर्दैन। र त्यसले यो विचारलाई अझ व्यावहारिक बनाउँछ।
हो, उसले तपाईलाई पठाउँदछ कि जाँचको लागि तपाई बाहिर जानु पर्छ, तर उहाँसंग कुरा गर्न आवश्यक छैन कि तपाई उसँग जानु भयो कि उहाँ तपाईलाई गर्नुहुन्छ। त्यसैले विदेशी ठाउँहरूमा पर्खनु पर्दैन किनकि यो तपाईंको घरमा आउनेछ र जब तपाईं अन्य चीजहरू गर्दै हुनुहुन्छ।
धेरै वर्ष पहिले, बार्टरिंग एक दैनिक चीज थियो। त्यहाँ पैसा थिएन र यो त्यस्तो सामान हो जुन अरूलाई आदानप्रदान गर्न सक्षम हुनको लागि थियो। यसैले सबैले खेती गर्थे, बथानका पशुहरू, आदि। किनभने यसले मोलतोल गर्ने चिपको रूपमा सेवा गर्‍यो।
अब, हामी तपाईंलाई त्यो पछाडि जान भनौं भनी सोच्दैनौं, तर निश्चय पनि तपाईको घरमा तपाईसँग धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईले चाहनुहुन्न, र तपाईसित नभएका धेरै चीज तपाई चाहानुहुन्छ। त्यसोभए किन बार्टर छैन? हामी तपाईले चाहेको कुरा लिने कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका छन र तपाईले चाहानु हुने कुराहरुको बदली पृष्ठमा प्रस्तुत गर्दैछौं। त्यसोभए सबैले जित्छन् किनकि तपाईं केवल ती व्यक्तिहरूलाई दिनुहोस् जुन तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ।
अभिनव व्यवसाय विचार: एक दिनको लागि प्रसिद्ध हुनुहोस्
जब तपाईं हलिउड ताराहरू देख्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् कि तिनीहरूले तपाईंलाई ईर्ष्यालु बनाउँदछ, सही? तपाईं तिनीहरूलाई यति उत्कृष्ट देख्नुहुन्छ, कि तिनीहरूसँग सबै चीजको लागि पैसा छ जुन तपाईंको जीवनलाई सुन्दर बनाउँदैन जुन तपाईंले सोच्नुभएको थियो र तपाईंले तिनीहरूको चाहना राख्नुहुन्छ।
तर यदि तपाईं यसलाई कोसिस गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? नवीन व्यवसाय विचारहरूको बीचमा तपाईं एक दिनको लागि प्रख्यात हुनुपर्छ। इम्पिlying गर्दै? राम्रो लुगा लिनुहोस्, सेलिब्रेटीहरू जस्तो गर्नुहोस् (कारमा, लिमोजिनमा), कि पापाराजी तपाईं नजिक आउँदछन् र तपाईं तिनीहरूलाई केहि भन्न चाहानुहुन्छ, कि तपाईंले बयान दिनै पर्छ ...
तपाईं ती सबै बाँच्न कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि अर्को देशमा उनीहरूले यस्तो कम्पनी बनाएको छ, मानिसहरूलाई यो प्रसिद्ध हुनको अनुभव लिन सहयोग गर्नका लागि राम्रो भाग र नराम्रो भाग दुबै (त्यस दिन तपाइँको गोपनीयता हुनेछैन)। र यस तरिकाले व्यक्तिहरू परीक्षण गर्दैछन्। र सावधान रहनुहोस्, तपाईंको केसमा प्रत्येक अनुभवको लागत e०० युरो हुन्छ। त्यसैले यो पैसा कमाउनु राम्रो विचार हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » अभिनव व्यवसाय विचारहरू
घरबाट पैसा कमाउन कसरी
पैसा कमाउनका लागि अनुप्रयोगहरू